Momba anay - Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
Any amin'ny tanànan'i Ningbo, faritanin'i Zhejiang izahay. Mpamatsy matihanina amin'ny fantsom-plastika, fittings ary valves izahay izay manana traikefa fanondranana taona maro. Ny vokatra lehibe ananan'ny orinasanay dia: UPVC, CPVC, PPR, fantsom-panafody HDPE ary fittings, valves, rafitra mpamafazana ary metatra rano izay novokarin'ny milina manokana mandroso sy ireo fitaovana tsara kalitao ary be mpampiasa amin'ny fambolena sy ny fananganana.
Mampiasà siansa hahasoa ny olombelona, ​​ampiasao ny teknolojia hitarihana ny fiainana
Ningbo Pntek staff dia hampiasa renivohitra ho rohy, siansa ary teknolojia ho fanohanana, ary ny tsena ho mpitatitra, hitondra ny anjara asan'ny tombony ambaratonga sy ny foibe R&D mifototra amin'ny tsipika plastika plastika, hampihatra ny paikady marika malaza, paikady fanitarana mizana sy paikady fampandrosoana. Ny paikadim-pampandrosoana vokatra vaovao "avo, vaovao sy maranitra" dia mampihena ny vokatra.
Hatramin'ny nananganana ny orinasa ary manao izay fara herinay foana mba hanomezana fahafaham-po ireo filan'ny mpanjifanay.
Ny dingana tsirairay amin'ny dingam-pamokarantsika dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena an'ny ISO9001: 2000.
Ny orinasanay dia tena vonona ny hiara-hiasa amin'ireo orinasa manerantany mba hahatratrarana toe-javatra mandresy.
Ningbo Pntek dia manome ny laharam-pahamehana ny kalitao sy ny mpanjifanay ary nahazo fankasitrahana avy amin'ny an-trano sy tany ivelany.
Izahay dia mandray ny lehilahy ho toy ny fototra ary manangona vondron'orinasa manan-danja indrindra izay mahay fiofanana tsara sy mandray anjara amin'ny fitantanana orinasa maoderina, fampandrosoana ny vokatra, fifehezana kalitao ary teknolojia famokarana.
Ny tanjonay dia ny hahazo ny tsy fivadihan'ny mpanjifanay sy hamerina hamerina amin'ny laoniny ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanomezana ny vokatra avo lenta avo indrindra amin'ny vidin'ny fifaninanana mitazona ny haavon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa avo indrindra.
Ny vokatra dia aondrana any Afrika Atsimo, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana, Azia atsimo, Azia afovoany, Rosia, Amerika atsimo, Afrika avaratra, afovoany afrika ary faritra sy faritra hafa.